Vanhu Vatsva Vanodarika Zviuru Makumi Matanhatu Vowanirwa maARVs
Chikunguru 27, 2012
Hurumende inoti ichawedzera huwandu hwevanhu vari kupihwa mishonga yema Anti Retroviral Drugs, ARVs, kubva pazviuru makumi masere kusvika pazana nemakumi mana ezviuru.
Mutevedzeri wegurukota rezvehutano, Dr Douglas Mombeshora, vati hurumende ichakwanisa kuita izvi zvichitevera rubatsiro rwaichawana kubva kuAmerica neBritain
VaMombeshora vataura mashoko aya pamusangano mukuru we 2012 International AIDS Conference wapera muWashington neChishanu.
Va Mombeshora vati vari kufara nemafambiro aita musango wemuWashington sezvo uri iwo wazoita kuti Zimbabwe ibatsirwe neimwe mari yekuti vamwe vanhu vasiri kuwana mishonga yema ARVs, vawenewo mishonga iyi.
VaMombeshora vati Britain neAmerica dziri kufara zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu nebazi ravo izvo zvaita kuti dzivimbise mari yekubatsira zvirongwa zvenyika munyaya dzeHIV/AIDS. VaMombeshora vati kushanda zvakanaka kuri kuitwa neNational Aids Council muzvirongwa zvekurwisa HIV/AIDS, zvimwe zvezvinhu zvaita kuti Zimbabwe iremekedzwe pamusangano uyu.
Vachitaurawo pamusangano uyu, mumwe mukuru mubazi rezvehutano m South Africa, Dr Yogan Pillay, vatiwo hurumende yavo iri kushanda nedzimwe hurumende dzemuAfrica mukutsvaga nzira dzekuti veruzhinji vasati vave kuwana mishonga yekurwisa HIV/AIDS vayiwane. VaPillay vati South Africa inoda kuti mishonga iyi inge ichigadzirwa mu Africa kuitira kuti isadhure.
Nyanzvi mubazi rezvehutano, Dr Angela Mushavi, vatiwo pari zvino bazi ravo riri kushanda nemadzimai akazvitakura vachivakurudzira kuti vavhenekwe ropa ravo. Dr Mushavi vati zvakakosha kuti mudzimai akazvitakura azive kuti ane HIV here kana kuti kwete, kuitira kuti akwanise kuwana rubatsiro rwunozoita kuti mwana wake azvarwe asina hutachiwona.
Dr Mushavi vatiwo zvakakosha kuti vana baba vavhenekewo ropa ravo panovhenekwa madzimai avo anenge akazvitakura.
Musangano uyu uri kutarisirwa kupera zviri pamutemo Chishanu masikati, apo vaimbove mutangamiri weAmerica, VaBill Clinton, vachavhara musangano uyu.
Musangano wegore rino wapindwa nevanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvishanu. Musangano unotevera uchaitirwa kuAustralia mu 2014.
Nyaya Ina Marvellous Mhlanga-Nyahuye